Famaritana: Amboary Audio amin'ny alàlan'ny transcript | Martech Zone
Alakamisy, Septambra 19, 2019 Alakamisy, Septambra 19, 2019 Douglas Karr
Tsy matetika aho no faly amin'ny teknolojia… Drafitra dia nandefa serivisy studio podcast izay manana fiasa mahaliana. Ny tsara indrindra, araka ny hevitro, dia ny fahaizana manova feo tsy misy mpamoaka feo tena izy. Ny famaritana dia mamindra ny podcast anao, miaraka amin'ny fahafaha-manitsy ny podcasto amin'ny alàlan'ny lahatsoratra fanovana!
Podcaster mazoto nandritra ny taona maro aho, nefa matetika tsy natahotra ny hanova ny podcast. Raha ny marina dia namela resadresaka mahatalanjona nianjera teny amoron-dàlana aho, rehefa nisy fotoana somary saropady ny fampahalalana tao amin'ny podcast… saingy tsy nanam-potoana hanaovana fanovana sy hamoahana azy aho alohan'ny fe-potoana farany.
Raha ny tena izy, raha mirakitra podcast 45 minitra aho, mila adiny iray na adiny roa mihitsy aza ny fanitsiana tanteraka ny firaketana, ny fampidirana intro sy ny outros, fandefasana azy ho an'ny transcription, ary famoahana azy amin'ny Internet. Saika torotoro aho rehefa miverina amin'ny rakipeo vitsivitsy. Na izany aza, fampitaovana mahomby tokoa izy io ary manana mpihaino marobe tokoa aho ka mila manohy mandroso.
Ny famoahana dia tsy editor fotsiny fa sehatra Podcast sy Video Studio iray manontolo. Ny fahaiza-manao mahavariana iray hafa dia ny fahaizana mampiditra teny izay tsy nolazainao tamin'ny fampiasana azy ireo Overdub endri-javatra!
Mampiavaka ny Descript
Transcription mitarika indostrialy - Mpiara-miasa miaraka amin'ny mpamatsy transcription marina indrindra mba hahazoana antoka fa mahazo ny transcription tsara indrindra ianao any.
Manova feo na horonan-tsary amin'ny alàlan'ny fanovana lahatsoratra - Hisintona ary milatsaka mba hanampy mozika sy feo vokany. Azo aondrana any amin'ny Final Cut Pro na Premiere ny horonan-tsary.
Ampiasao ny Tonian-dahatsoratra ho an'ny fanitsiana tsara miaraka amin'ny fades sy fanovana volume.
Fiaraha-miasa mivantana - Fanovana sy fanamarihana multiuser amin'ny fotoana tena izy
Firaketana Multitrack - Ny famoahana dia mamorona transcript mitambatra tokana
Overdub - Amboary ny raki-peo nataonao tamin'ny fanoratana fotsiny. Ampandehanin'i Lyrebird AI
Integrations - Via Zapier, azonao atao ny mampifandray ny Descript amin'ny fampiharana tranonkala malaza an-jatony.
Raha te hiditra amin'ny Descript Beta ianao dia azonao atao ny mampihatra eto:
Fandaharana Beta Program
Sora-tendrony amin'ny mpiara-miasa aminy Brad Shoemaker hajaina ao Creative Zombie Studios ho an'ny mahita!
Tags: adobe farany fanapahana proadobe premiereaifahaizana artifisialytenympamoaka feofamaritanafamaritana podcast studiolyrebirdLyrebird AILahatsary Marketingtonian-dahatsoratra podcaststudio podcastfizarana voalohanyfandikana video